Nin xalay lagu dilay Garoowe xilli la isku diyaarinayay xuska 13 guurada Puntland – Radio Daljir
Agoosto 1, 2011 12:00 b 0
Garoowe, July 31 – Waxa caawa magaalada Garowe lagu dilay nin dhallinyaro ah xilli aad loo adkeeyay ammaanka magaalada oo isku diyaarinaysay dabaal-daggii ballaarnaa ee saaka loo sameeyay xuska sannad-guurada 13-aad ee dhalashadii Puntland.
Habayaraatee ma ay jiraan wax faahfaahin ah oo ka soo baxaya dilkaas, mana jirto jiho illaa iyo haatan sheegatay mas’uuliyadda fal-dambiyeedkaas. Ciidamada ammaanka ayaan iyaguna illaa iyo haatan ka hadal dilkaas.
Si kastaba ha ahaatee ilo xog-ogaal ah oo ka gaabsaday in la magacaabo ayaa Daljir xalay u sheegay in ciidamada ammaanka ee Garoowe ay wadaan baaritaan aad u wayn oo lagu doonayo in la soo helo jihadii ka dambaysay fal-dambiyeedkan.
Si ka duwan magaalooyinka waawayn ee Puntland, gaar ahaan Boosaaso iyo Gaalkacyo, dilalka qorshaysan ayaa naadir amaba ma-jiraan ka ah caasimadda dawladda Puntland ee Garoowe iyo guud ahaan gobolka Nugaal, marka laga reebo shilal la xiriira aanooyin qabiil.
Sannadkan 2011-ka ayaa siyaabo kala duwan waxaa Puntland, gaar ahaan Boosaaso iyo Gaalkacyo loogu dilay daraasiin dad ah, una badnaa nabaddoono, wax-garad iyo saraakiil ka tirsan laamaha amniga iyo fulinta sharciga ee Puntland.
QM oo ka digtay in macaluusha ku fidayso lix gobol oo kale, kuna baaqday gargaar deg deg ah.
Wariye Boston iyo maxaabiis kale oo laga sii daayay xabsiga Boosaaso.